Uchishandisa Wiricheya neSevere Autism | Karman® Mawiricheya
Uchishandisa Wiricheya neSevere Autism
Vazhinji vanopokana kuti mwana kana munhu mukuru ane autism yakaoma anogona kunge asina iyo simba kushandisa a wiricheya nokuti kufamba nekuti zvinogona kuve zvine njodzi kwavari uye kune vamwe vakavakomberedza. Nepo vamwe vachataura kuti vadiwa vavo vanobatsirwa nazvo wiricheya nekuwana nyore kufamba. Ichokwadi ndechekuti, zvinoenderana nemunhu ane autism yakaoma uye yavo chaiyo mamiriro uye mamiriro. Vamwe vanhu vane autism yakaoma vanogona kuve nekwaniso yekushandisa iyo mavhiripu nokuti kufamba, zvakadaro zvimwe zvinhu zvinogona kukonzeresa pfari nguva dzinogona kukonzeresa kuti varasikirwe neyavo kugona kuva izere kana chero kutonga.
It yakakosha kuti kana munhu ane autism yakakomba anogara achitariswa zvakanyanya kuti ave nechokwadi chekuti havazorasikirwe ne yavo wiricheya kunyanya kana iri kunze kwevanhu. Chimwe chikonzero chakajairika pakati pevaya vanofunga kuti vanhu vane autism yakaoma havana iyo kugona kushandisa wiricheya ndeyekuti havakwanise kushandisa mavhiripu imhaka yekuti vanogona kutadza kuzvidzora nekuzvikuvadza kana kukuvadza vamwe. Zviitiko zvinotangira pakudonha pa mawiricheya achikonzera kuipa kune ivo pachavo, kurasikirwa nekutonga nekukuvadza vamwe. Kana dzikatariswa zvakanyanya, izvi zvinogona kudzikisa njodzi yekukuvara kwavari nekune vamwe. Kumba ivo kashoma kuti vave nezviitiko zvinoita kuti zvive zvakachengeteka kwavari kushandisa a wiricheya, zvisinei, panofanira kugara paine manejimendi.
Vazhinji manejimendi vanonzwisisa kuti pane pane tarisiki yavo yakatariswa lay inovabatsira ipa nharaunda yakachengeteka kwavari. Semuenzaniso, kana ruzha rwakati kana zviitiko zvingave zvichikonzera, vanogona kuyedza kudzivirira nekupa rutsigiro kubatsira iye munhu kuzorora uye kukurira. Vagadziri ndivo zvakare munhu angangoziva kuti vanhu vari pamitambo vanogona kushandisa here wiricheya uye kana zvikarerutsa yavo kufamba.
Vamwe vabereki vanotaura kuti vana vavo vane autism yakaoma vane izvi simba kushandisa a wiricheya asi kurasikirwa nazvo kana vaine zvikamu. Nekudaro, kazhinji izvi zvikamu hazvigare zvichikurudzirwa, izvo zvinobvumidza mubereki kuita mabasa ezuva nezuva.
Mumwe anofanirwa kuongorora mamiriro ezvinhu uye nharaunda iyo iyo munhu ane hutachiona hwakakomba anokwanisa kushandisa mavhiripu to batsira kudzivirira zviitiko kubva pakuitika. Matanho ekuchengetedza anofanira kugara achitorwa, uye maneja anofanira kuona yose kuzvidzora kuve nechokwadi chekuti munhu ane autism anogara akachengeteka. Kune vese vanotenda kuti mwana wavo ari mukutonga kwakazara, vanofanirwa kudaro kupihwa nekutarisira kuchengetedzeka kwemunhu wese.
Nzira dzekuwana dzinodhura wheelchair yemagetsi